Tilmaamaha Dalxiiska ee Washington DC waa dhiirigelin mustaqbalka socdaalka adduunka iyo dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Tilmaamaha Dalxiiska ee Washington DC waa dhiirigelin mustaqbalka socdaalka adduunka iyo dalxiiska
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Cameroon • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Francoise Kameni Lele waxay ku sii jeeddaa gurigeeda oo ku taal Yaounde, Cameroon iyada oo ay ugu mahadcelinayaan shaqada naf-hurnimada ah ee hage dalxiis oo shaqo la’aan ah oo lagu magacaabo Maricar Donato oo ka socda Washington DC, Mistral Anampa oo ka socda Maryland, David Herb iyo Clara Sachs oo ka socda New Jersey, USA.
COVID-19 ma burburin karto ballanqaadka hoggaamiyaha dhabta ah ee warshadaha socdaalka iyo dalxiiska. Hogaamiyayaashan runta ahi waa hagayaasha dalxiiska iyo xubnaha Xiriirka Dunida ee Ururada Hagaha Dalxiiska. (WFTGA), eTurboNews ku dhawaaqay inay yihiin geesiyaal eTN. Daawo fiidiyowga sababta.
Sheekadu waa sheekada dalxiis ku xayiran Cameroon oo lagu magacaabo Francoise Kameni Lele. Waxay sidoo kale xubin ka tahay waaxda socdaalka iyo dalxiiska iyo danjiraha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) gudaha Cameroon. Dhammaantood waxay bilaabeen markii ay ka tagtay Cameroon illaa Berlin, Jarmalka.
Waxay qorsheyneysay inay kaqeyb gasho bandhigga safarka ITB iyo kulan Maarso 4 ah oo ay qabanqaabisay ATB, PATA iyo Nabadgalyo Dalxiis iyo daabacaadan. Waxaa si layaableh kulanka loo abaabulay si looga wada hadlo saameynta Coronavirus ee safarka iyo dalxiiska.
ITB waa la joojiyay tan iyo markii Francoise ay awoodi weyday inay hesho dib ugu laabashada dalkeeda Cameroon. Waxay u ambabaxday New York, dib ugu soo laabashada Frankfurt, mar labaadna New York, ugu dambayntiina waxay hadda raaceysaa diyaarad nooceedu yahay B787 Dreamliner ET509 oo u socota Addis Ababa. Waxay ahayd waayo-aragnimo cabsi badan, laakiin waxay leedahay saaxiib cusub oo wanaagsan, kaasoo ah hage dalxiis oo aan daneyste ahayn oo ku yaal Washington DC haddana ah halyeeyga eTN ee magaciisu yahay Maricar Donato.
Maricar ayaa u sheegtay eTurboNews maanta: “Wixii Francoise ii sheegay maanta runti way i qabteen wuuna samayn doonaa muddo dheer. Waxay tiri: Hadaanay ahayn caawintaada waan isdilayay. "
Dalxiisku waa warshad nabadeed iyo saaxiibtinimo. Cidina sidan uma oga sida Louis D'Amore, madaxweyne iyo aasaasihii Machadka Caalamiga ah ee Nabadda ee Dalxiiska. Isaga oo ka soo wacaya gurigiisa magaalada New York wuxuu yidhi:
Waxaan aad uga xumahay inaan ogaado dhibaatooyin badan oo Francois uu la tacaalay oo ka dhashay Faafida. Waxaan aqaanay Francois in ka badan 20 sano. Francoise had iyo jeer waxay si iskeed ah isugu dhiibaysaa inay gacan ka geysato wanaagga weyn ee Dalxiiska Afrika. Waa wax lagu farxo in la barto sida hagayaasha dalxiiska qowmiyado iyo caqiidooyin kala duwan ay isugu yimaadeen si ay u caawiyaan Francois waqtigeeda ay u baahan tahay - taasoo muujineysa ruuxa martigelinta runta ah iyo mabda'a aasaasiga u ah diimaha oo dhan "Dadka kale ugu samee sidaad dooneysay inay kugu sameeyaan" iyo, oo ka turjumaya Masiixi ahaan toddobaadkan shanaad ee Ista, "Isjeclaada sidaan idiin jeclaaday."
Maanta Francoise Kameni Lele waxay aakhirkii ka ambabaxday Newark, New Jersey iyadoo duulimaad ka raaceysa Ethiopian Airlines kuna sii jeeday Addis Ababa. Ugu dambeyntii waxay ku sii jeeddaa gurigeeda oo ku taal Yaounde ee Cameroon.
Toddobaad ka hor Maricar ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ku tiri: “Waxaan u soo diray qaar ka mid ah waxyaabaha wanaagsan bulshada hagitaan dalxiis ee maxalliga ah ilaa hagaha sare ee Cameroon, François Kameni, oo ku xanniban halkan oo aan ka soo laaban karin shir. Maricar Donato, wakiilka aagga, iyo isku duwaha Xiriirka Caalamiga ah ee Dalxiisyada Dalxiiska ayaa hormood ka ahaa dadaalka lagu caawinayo hageheena kale.
François sidoo kale waa kuxigeenka xiriirka kubbadda koleyga Afrika sidaa darteed waa inaan geeya iyada akadeemiyada dhalinyarada iyo Nats Park. Waxay ahayd jimicsi wanaagsan iyo maalin baashaal.
Francoise waxaa lagu dhex qabtay dalal xiraya xuduudaha mana awoodin inay ku laabtaan wadankoodii sidii loogu talagalay in ka badan 2 bilood ka hor. Isku daygeeda inay baxdo waxaa lagu soo koobay garoonka diyaaradaha ee Frankfurt markii loo diiday inay u sii gudubto Faransiiska si ay duulimaad ugu qaado Cameroon oo dib loogu celiyo Mareykanka.
Markii aan imid Mareykanka hal hudheel kadib Francoise kale ayaa xirmay markii fayrasku si ba'an ugu faafay New York. Waxay u ambabaxday Washington DC iyadoo rajeyneysa inay sidoo kale caawimaad ka hesho safaaraddeeda.
Goorma eTurboNews daabacday sheekadeeda eTN Reader Maricar Donato waxay la xiriirtay Francoise doorkeeda safiirka astaanta ee Xiriirka Dunida ee Ururada Hagaha Dalxiiska. (WFTGA)
Ma jirin ganacsi hage lacag bixin ah oo loogu talagalay iskii u shaqeysta Maricar, laakiin kama hor istaagin inay isticmaasho lacagteeda iyo waqtigeeda si ay u caawiso xubin kale oo ka tirsan warshadaha safarka iyo dalxiiska. Iyada oo hudheeladu xidhan yihiin ayay ku abaabushay qol dhulka hoostiisa ah xubin ka tirsan Cameroon-Mareykan ka tirsan beesheeda oo loogu talagalay Francoise.
Maanta booqashada WFTGA waxay hageysaa Mistral Anampa oo ka yimid Maryland, David Herb iyo Clara Sachs oo ka yimid New Jersey ayaa Francoise ka kaxeeyay Washington DC una dhoofay garoonka diyaaradaha Newark ee New Jersey. Iyadoo ay weheliyaan wakiil ka socda Safaaradda Cameroon ee Mareykanka, waxay hubiyeen in Francoise ay soo hubisay oo ay raacday duulimaadkeedii Afrika.
Qoraalkeedii sagootinta ahaa ee eTurboNews Wuxuu yiri: “Jürgen, waxaan joogaa irida laga fuulo guriga waxaanna kusii jeedaa wadankeyga COVID19 waxay joojin doontaa Nevers dalxiiska. Cirku waa xadkaaga. ”
Dhageyso wareysiga iyo warbixinta nolosha ee garoonka Newark:
WFTGA waa urur caalami ah oo hoos yimaada isla markaana xubin sharaf ka ah Isbahaysiga Caalamiga ah ee Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska (ICTP))
Madaxweynaha ururka hada jira waa Alushca Ritchie oo kasoo jeeda Capetown South Africa. Alushca Ritchie waxay u qalantay inay noqoto hage dalxiis oo loo maro Western Cape ee Koonfur Afrika sanadkii 2010. Waxay noqotay xubin ka tirsan gudiga Cape Tourist Guides Association sanadkii 2011 waxayna maamule ka noqotay ilaa 2013. Waxay wali ku sii jirtaa guddiga iyada oo masuul ka ah Xiriirka Dadweynaha. Waxay ku lug leedahay dadaal shaqsiyeed oo la yiraahdo Xiriirka Hagaha Dalxiiska Cape waxayna caawisaa Xoghaynta Adeegyada Dalxiiska Koonfur Afrika. Alushca sidoo kale waxay xubin ka tahay Guddiga Maamulka ee Dalxiiska Cape Town. Waxaa loo doortay Golaha WFTGA sanadkii 2015 waxaana loo magacaabay maamule. Alushca waxaa loo doortay Madaxweynaha WFTGA sanadihii 2017 iyo 2019.